Umzi mveliso weSandblaster Gun - iChina sandblaster Gun abavelisi, abaxhasi
Centrifugal uMgqomo Finishin ...
Isandla siphethe umpu weSandblasting ...
2021 uhlobo olutsha oluzenzekelayo dru ...
Yokuthutha ibhanti oluzenzekelayo San ...
Isandla Esibanjelwe Isanti Ukutshiza Ukutshiza iMipu yokuGqwesa iMithombo yeendaba, isoda, i-Bead, i-Walnut, i-Aluminium oxide-yomoya
Aluminum Isandblaster】 Umzimba wealuminium ulula kwaye uyasebenza, kwaye uhlobo olugcinwe ngesandla kulula ukulusebenzisa.
Ukuhamba kwesanti kuyahlengahlengiswa kwaye i-sandblasting isasazwa ngokulinganayo ukugcina izinto.
【Kulula ukuyisebenzisa】 enikezelwe kuzo zonke iintlobo zeekona eziqaqambileyo nezincinci zentsimbi, ukupeyinta ukutshiza, imiphetho eluhlaza,
Iinkcukacha zomhlwa; imbiza enkulu enezinto zonke ezinesanti: i-corundum emnyama, i-silicon carbide, ubuhlalu beglasi, njl.
Ukusebenza okuphezulu okuhlala ixesha elide】 -Ilast blaster blaster eqhuma isantya esiphezulu semithombo yeendaba
ezisusa ngokukhawuleza ipeyinti, umhlwa, umhlwa nezikali. Sebenzisa i-blaster eneentlobo ezininzi zemithombo yeendaba ezinesanti
i-aluminium oxide abrasives, ubuhlalu, isoda okanye iqokobhe le-walnut entle kuxhomekeke kwiimfuno zesicelo seeprojekthi.
QAPHELA In: Kwinkqubo yokusebenzisa imveliso, kuya kufuneka unxibe iigloves kunye nokukhuselwa kwamehlo kunye nezinye izixhobo zokusebenza ngokukhuselekileyo.
Xa usebenzisa umpu, sukujolisa umpu ebantwini nakwizilwanyana.
Inkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa】 Sisoloko simi ngokuqinileyo emva kwako konke ukuthengwa kwakho. Ukuba nangasiphi na isizathu awonelisekanga nge-100%
Nceda usazise kwaye iqela lethu lenkonzo yabathengi liya kukunceda ubuye okanye ubuyisele imali.
Umoya weSandblaster Gun uQhumisa umpu kwiKhabhinethi yeSandblasting ye-990L / 1200L yeSand Blast yeKhabhinethi yeeNdawo zeSandblaster
Umpu weSand Sandllaster
Zilungele uninzi losasazo lokuqhushumba olunokuphinda lubuyeke- iglasi yeglasi, iiseramikhi, i-aluminium oxide, kunye nobukhulu bentsimbi kunye nomdubulo. Khetha imithombo yeendaba efanelekileyo yokuqhambuka kwesicelo sakho.
Ukusebenza kompu wokudubula okuphezulu kunika ukubambelela okuhle kumqhubi, kwaye ivumela ulawulo oluchanekileyo lwepateni yokudubula.
Igcina i-jet yomoya kwaye iqhume umlomo ngokuhambelana ngokuchanekileyo ukukhulisa ukusebenza kakuhle kunye nokunciphisa ukunxiba komzimba.
Uyilo oluqinileyo lokugcina imipu kunciphisa ukudinwa kwabaqhubi kunye nokunyusa imveliso ngexesha lokuqhushumba ixesha elide.
I-HOLDWIN eluhlaza okwesibhakabhaka iSandblaster yomoya iSiphon yokuTyhiliza iGun Kit kunye neCeramic Nozzle Tips Iingcebiso zesanti zokuThambisa umbhobho
- 100% entsha kraca kunye nomgangatho ophezulu.
-Nxiba ukumelana, nxamnye nokhukuliseko, ukuhlala ixesha elide.
- Umphezulu wesanti, imarmore emhlophe.
Isixhobo esinamandla sokususa itela, umhlwa, ipeyinti endala kunye nezinye izinto.
- Endaweni yentsimbi yentsimbi, ingxubevange yentsimbi yokuqhushumba umlomo, ukugcina isinyithi, ukunciphisa iindleko.
Uyilo lweenjongo ezininzi zokuqhushumba kunye noxinzelelo oluphezulu lolwelo okanye ukucoca umoya kweendawo kunye nomphezulu.
Isanti Blaster Gun Kit ephathekayo yePneumatic Gravity Sandblasting Gun Sandblaster Machine Izixhobo, Susa umphezulu womhlwa
I-PNEUMATIC GRAVITY SANDBLASTING GIT KIT: kulula ukuyisebenzisa, uyilo lomatshini ophathwayo wesanti, ifanele ephezulu inokubamba i-510CC ephakathi.
UMSEBENZI OBALULEKILEYO: Akukho lula ukuphatha kuphela kodwa kulula nokusebenza, ukutshiza kuyakhawuleza kwaye kuyalingana kwaye kugcina izinto.
EZININZI: Lo umpu wokutshiza unoluhlu olubanzi lwezicelo, kungekuphela nje ngesanti yendaba kodwa kwanonyango lomphezulu kunye nokulungiswa kwefanitshala.
INKXASO YOKUHLAZIYWA KWEENDABA ZOKUGAYA: ezinje ngesoda yokubhaka okanye iiglasi amaso, isodium bicarbonate, isilika, walnut, garnet, ungasebenzisa imithombo yeendaba engama-46-100 enesanti.
INJONGO: Isetyenziselwa ukugqibezela zonke iintlobo zeekona ezifileyo zesinyithi esincinci kunye nesinyithi esincinci, ukutshiza kunye nokuphola .
Isixhobo esenziwe ngesandla sePneumatic Sandblasting Isixhobo esiphathekayo Umatshini wokuqhumisa Umatshini wokuqhumisa umlomo weeNtloko zeSand Blaster
Isicelo: isanti (i-brown aluminium oxide, ubuhlalu beglasi njl.
I-Sandblast Gun Kit Isandla esincinci esiphethwe yi-Sand blaste ephathekayo i-Pneumatic
Isanti yompu weSandblast: ISand Blaster ifaka ivalve yolawulo ehlengahlengiswe ngokupheleleyo ukuze ukhethe ngokuchanekileyo kwaye ulawule ukuba yeyiphi imidiya oza kuyisebenzisa.
Isicelo: Ekhethekileyo kwikona yesinyithi encinci kunye nokukhanya, ipolishi yokutshiza, umda omdaka, iinkcukacha zokususa umhlwa
Imbumbulu ephambili: ukukhanya, ukuphatha ngesandla kwaye kulula ukusebenza.
Ukuphatheka kakuhle: Umpu wesandblast linyathelo elingaphezulu kwesandlbaster yakho encinci kodwa isenokuphathwa kwaye isebenziseka lula.
Phawu: Yoyisa ngokulula zonke iiprojekthi zokuqhushumba kwesanti. I-Sandblasters yenzelwe ngokukodwa ukusebenza kunye nokusebenziseka ngokulula.
1. Faka i-1/4 yamadoda kwimirhumo yombhobho we-NPT oyikhethile kwisiseko sokuphatha. Iteyiphu yetaflon icetyiswa ukuthintela ukuvuza komoya. Musa ukuqinisa ngaphezulu, okanye kukho ithuba lokuhluba into efakiweyo yentsimbi, okanye isiphatho semipu
2. Qiniseka ukuba umgca womoya ukhutshiwe.
3. Qinisekisa ukuba umoya ohanjiswayo ucocekile kwaye ngakumbi womile. Akukho santi Blaster iya kusebenza ngokufanelekileyo ngomswakama ogcwele umoya, IYUNITHI AYISAYI KUSEBENZA NGOKULUNGILEYO KWI-125PSI.
4. Vula ivalve yokuhamba kwesanti kwindawo oyifunayo. Beka umlomo wombhobho weceramic kumgama otofotofo ukusuka kwinxalenye yentlabathi eqhushumbisiweyo, malunga nee-intshi ezi-6 ukuya kwezi-24 kucetyiswa.
1. Ukuhamba kweSanti kuyamisa
A. Umoya ohanjiswayo unokuqulatha ukufuma. Qinisekisa ukuba kwahlulwa amanzi ngokufanelekileyo.
B. Jonga uxinzelelo lomoya (kufuneka ubuncinci be-60PSI)
C. Susa ikliphu yangaphambili kwidama lokugcina amanzi, phakamisa kwaye ujikeleze idama kancinci kwaye ujonge i-orifice kwivelufa yolawulo lwezinto. Ukuba uthintelwe, susa inkunkuma kwaye uphinde udibane.
D. Qiniseka ukuba umlomo wamanzi uqiniswe ngokupheleleyo (Qinisa ngesandla kuphela).
E. Susa umlomo ukuze ubone ukuba into efakiweyo yentsimbi ilahlekile okanye ayikho. ISANDLA ESIPHATHELWE ISANDLA IBLASTER AYISAYI KUSEBENZA NGAPHANDLE KOKUFAKA I-STEEL.
2. Impazamo yeSand Pattern:
A. Umoya ohanjiswayo unokuqulatha ukungalunganga. Qinisekisa ukuba kwahlulwa amanzi ngokufanelekileyo.
B. Imithombo yeendaba yokuqhushumba kwesanti inobungakanani bamasuntswana obungahambelaniyo kwaye kufuneka ixinaniswe. Sebenzisa isikrini esincinci se-pattem ubuninzi be-1/16 ″ yokuvula.
C. Umbhobho unxitywe kwaye kufuneka ubuyiselwe.
D. UKUFAKA I-STEEL KUKHONA KUKHO OKANYE KULAHLEKILE.
Boron khabhayithi nesabhokhwe umlomo ukuba ukuqhumisa esirhabaxa
Ukuxinana: ≥2.48 / cm3
Ubuncinci bobunzima: ≥3500kgf / mm2
Amandla e-Flexural: ≥400MPa
Indawo yokunyibilika: 2450 ℃
Ubomi bempahla nganye: I-Steel Shot: 2000-2500h, isanti yeQuartz: 1000-1500h, iCorundum: 500-1000h
Isixhobo: i-boron carbide
Imilinganiselo: 35x20mm / 1.38 × 0.79inch
Wazala ubukhulu: 3mm, 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 10mm 12mm
Umgangatho ophezulu weSanti ye-Sandblaster yeKhabinethi yokuTsala iSandblast
-Kulungele uhlobo lwebhokisi kumatshini wokuqhumisa kunye nohlobo lwebhokisi kumatshini wokuqhumisa ozenzekelayo.
-Ingasetyenziselwa iglasi yesanti, ukuqhushumba kwesanti, ipolishi yomphezulu, iinxalenye zoomatshini.
Umbhobho ukhawulezisa umoya kwaye urhabaxa njengoko umxube uphuma esiphelweni sombhobho.
-The taper kunye nobude esatsiba ugwebu kunye outlet ukumisela ipateni kunye velocity le esirhabaxa ophuma umlomo.
-Ukubunjwa kwezinto zokugcoba kumisela ukuxhathisa kwayo.
-Yenzelwe ukucoca umphezulu, ukwehla kunye neglasi, i-aluminium alloy kunye nezinye iindawo zokuhombisa ze-sandblasting kunye nokukrolwa kwemabhile.
Imipu ephathekayo yesanti ye-90psi ehlengahlengiswayo Umatshini omncinci wokuqhumisa iSetting Sandblasting Spray Set
Ukutshabalalisa umpu we-Sandblasting Spray
-Ukuhlengahlengisa ukuhamba: Isixhobo somoya esinokuqhumisa sinokulungelelanisa ukuhamba ngokulula.
Umgangatho ophezulu: Umzimba wePlastiki kunye nealuminiyam ulula kwaye uyaphatheka, usebenza ngokulula.
-Umsebenzi: Yenzelwe iintlobo ezininzi zokukhanya kunye neekona ezincinci zentsimbi, ukutshiza ipolishi, imiphetho eluhlaza, iinkcukacha zokususa umhlwa kunye nokunye.
Umsebenzi olungileyo: Nika i-atomization elinganayo kunye nobukhulu besahlulo sokupeyinta umphezulu.
-Iyaphatheka: Umzimba wePlastiki, ulula kwaye uhambelana, ungathatha ngokulula.
-Isicelo: Iimbiza ezinkulu zomthamo omkhulu zisebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zesanti yentsimbi emnyama kunye nokunye.
Uhlobo lwe-B uhlobo lwe-sandblast Gun kunye neBoron carbide umlomo G01
[Imathiriyeli]: IAluminiyam + i-boron carbide
[Ubungakanani]: I-Boron carbide Nozzle Ububanzi bangaphakathi: 8mm
[Kusebenza kwi]: ibhokisi yomatshini wesandlb sandbox kunye nohlobo lwebhokisi oluzenzekelayo kumatshini wesanti
[Yisetyenziselwe]: iglasi yesanti, i-sandblasting, ukucola komhlaba, iinxalenye zoomatshini
[Yenzelwe]: ukucoca umphezulu, ukususa umhlwa kunye neglasi, ialuminiyam ingxubevange kunye nokunye ukuhombisa umphezulu wesanti, ukukrolwa kwemabhile.
Isandla esenziwe eSandblasting Gun ephathekayo yomoya esirhabaxa xa kuthe kwakho imbabala SJ-G08
Ukukhusela umhlwa womoya oSasaza iBlaster Blaster Gravity feed Sandblasting Gun Portable Pneumatic Sandblasting Gun Izinto zorhwebo
Isandla esisesandleni seSandblasting Gun ephathekayo yomoya
1 Ngokwendlela oqhele ukusebenzisa ngayo, unokuhlengahlengisa ukuhamba kwesanti kunye notshintsho lwemilomo.
I-2.Izixhobisa ngomthamo ophezulu kwaye ilunge kakhulu ukuyisebenzisa.
I-3 port yokungena komoya inezixhobo zokucoca ezinokuthintela ukumiswa.
Kukho ukulunga okuninzi komzimba wayo we-aluminium yonke, njengobunzima, imo yokusebenza ephathwayo ngokulula, ukusebenza ngokukhawuleza, isanti kunye nokugcina izinto.